Health – My Life Magazine
डा अनिल भट्टराई स्वीजरल्याण्डको लाउजन विश्वविद्यालयले गरेको एक अध्ययनअनुसार जुलाई–अगष्टमा भन्दा डिसेम्बर–फेब्रुअरीमा हृदयाघात (हर्टअट्याक)का बिरामी बढी देखिएका छन्। एक लाख मानिसमा जुलाई–अगष्ट र डिसेम्बरदेखि फेब्रुअरीसम्मगरी दुई फरक–फरक मौसममा अध्ययन गरिएको थियो। त्यसक्रममा तिनीहरुको रक्तचाप, ब्लड…
संगिनी तीनमहिने सुई परिवार नियोजनको अस्थायी साधन हो । हरेक तीन महिनामा लगाइने भएर यसको नाम तीनमहिने सुई रहन गएको हो । एकपटक लगाएपछि तीन महिनासम्म ढुक्क हुने भएकाले यसलाई भरपर्दो अस्थायी गर्भनिरोधकको साधन मानिन्छ…
वायु प्रदूषण : प्रदूषणको मारमा गर्भको निर्दाेष शिशु…
चिसो मौसम सुरु भएसँगै वायु प्रदूषणको त्रास पनि काठमाडौं उपत्यका लगायत देशभरका विभिन्न शहरहरुमा सुरु हुन थालेको छ । हरेक शहरवासीले फेर्ने सासमा सवारी साधनबाट निस्किएको धुवाँ र उद्योग कलकारखानाबाट निस्किएको धुवाँ मिसिएको छ। वायु…
थाहै नभई हुन सक्छ आँखाको क्यान्सर
HealthOctober 20, 2019
डा. रोहित सैँजु एक दशक अगाडि अलि कम र अहिलेको दशकमा एकदम धेरै सुनेको रोग क्यान्सर हो । शरीरको विभिन्न अंगहरु फोक्सो, आन्द्रा, कलेजो, पाठेघर, स्तनलगायतमा क्यान्सर भए जस्तै आँखामा पनि क्यान्सर हुन्छ । आँखामा…
पुस्तौं पुस्तासम्मलाई दुख दिईरहन्छन् यी रोगहरुले
HealthSeptember 29, 2019
धेरैलाई अनुवांशिक रोगको समस्याले सताईरहेको हुनसक्छ । पुस्ताहरुलाई लागेको रोग उनको सन्ततीलाई समेत लाग्नु नै अनुवांशिक रोगको मूल विशेषता हो । यो पूर्खाको वंश वा जीनको माध्यमबाट अर्काे पुस्तामा सर्ने गर्दछ । अनुवांशिक रोगहरु पनि…
प्याकेटवाला दुधका कारण अबको १० वर्षमा ४० प्रतिशतमा…
एजेन्सी । नक्कली दुध बनाउन प्रयोग गरिने केमिकल तथा अन्य खतरानाक रसायनका कारण क्यान्सर तथा ट्यूमर जस्ता खतरानाक बिरामीको संख्या बढिरहेको छ मिलावट गरिएको दुधको सेवनले क्यान्सर र ट्यूमरको खतरा बढ्दै गएको क्यान्सर रोग विशेषज्ञ…
मधुमेहका कारण पुरुषलाई ११ र महिलालाई १३ प्रकारका…
ओन्ली माई हेल्थ टाइप टु मधुमेह र क्यान्सर दुबै जीवनशैलीसँग जोडिएको रोग हो । हालै चीनमा एउटा अनुसन्धान गरिएको छ जसमा टाइप टु मधुमेहका बिरामीलाई कस्ता क्यान्सरको खतरा हुन्छ भन्ने जानकारी दिइएको छ । अध्ययनमा…
सामान्यताः महिनावारी भएको समयमा तल्लो पेटमा दुखाइ हुनु सामान्य नै मानिन्छ । तर, कुनै महिलालाई हरेक महिना महिनावारीको समयमा अत्यधिक दुखाइ हुने गर्छ । कुनै महिलाहरु महिनावारीको समयमा दुखाई र रगत बगेको कारण ओछ्यानमा नै…
ग्यास्ट्रिकलाई हामी ‘राष्ट्रिय रोग’ भन्छौं। जमघट या भोज नै किन नहोस् यस विषयमा कुरा भइहाल्छ। ग्यास्ट्रिकले साँच्चै धेरै मानिसलाई सताएको हुन्छ त ? स्वास्थ्य कार्यालय, ललितपुरको तथ्यांक यही भन्छ– जिल्लामा सबैभन्दा बढी ग्यास्ट्रिकका बिरामी छन्।…
के हो कस्मेटिक सर्जरी ? के केको गर्न…
कस्मेटिक सर्जरी प्लास्टिक सर्जरीकै एउटा अंग हो । कस्मेटिक सर्जरीलाई सुन्दरता निखार्ने प्रक्रियाका रुपमा पनि लिने गरिन्छ । विशेषगरी अनुहारमा नमिलेको भाग र चाउरी परेको छालालाई तन्काउनेदेखि लिएर सुन्दर अनुहार तथा शरीरका लागि कस्मेटिक सर्जरी…